भाग्यमानीले मात्रै देख्ने जिउदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गरेर सेयर गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ – live 60media
भाग्यमानीले मात्रै देख्ने जिउदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गरेर सेयर गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ
काठमाडौँ शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।
हिन्दू धर्ममा रामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृ’त्युज’न्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ । शंख महाभारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो। यो हिन्दु धर्ममा अति पवित्र मानिन्छ।
यो धर्मको प्रतीक मानिन्छ। यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हातमा शोभायमान देखिन्छ। बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ । पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ । औषधीका रूपमा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]आयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ ।
शंख भस्म बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ । यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् । शंख भस्म अम्लपित्त, अनुहारको चाया, डण्डीफोर र खत हटाउन उपयोगी हुन्छ । अनिद्राको बिरामीलाई कानमा दुइटा शंख राख्दा समुद्री लहरको कर्णप्रिय आनन्दले निन्द्रा लगाउँछ भने शंख जलले मुख धुँदा अनुहार उज्यालो हुन्छ ।
← कोरोना भाइरस: भारतमा छ जनामा देखियो नयाँ प्रकारको भाइरस
के ग’र्भावस्थामा नरिवल खाँदा साँच्चै बच्चा गोरो जन्मिन्छ ? यस्ता छन् केहि भ्र’म र यथार्थ ! →